BARNAAMIJYO | Radio Danan (DBN) 94 FM | Page 43
Home / BARNAAMIJYO (page 43)
Cod:Wiil Jaceylkiisa Ku Waayay Sab gaadnimo
September 26, 2014	Comments Off on Cod:Wiil Jaceylkiisa Ku Waayay Sab gaadnimo
in kastoo layaabka magaalada muqdisho uu iska badanyahay hadana waxaan idin soo gudbineynaa layaab qabsaday mid kamid ah dhalinta magaalada muqdisho. wiilkan waxaa uu caawa marti ku ahaa barnaamijka koorta caasimada . inta uusan layaabka u gudbin waxa uu inoo ...
Cod:Ganacsatada iibisa dawooyinka dumarka ay isku qurxiyaan Oo Qaati ka Taagan gabdhaha ku Cusub isticmaalka daawada.
September 26, 2014	Comments Off on Cod:Ganacsatada iibisa dawooyinka dumarka ay isku qurxiyaan Oo Qaati ka Taagan gabdhaha ku Cusub isticmaalka daawada.
cabdi risaaq oo kamid ah dhlinyarada ka shaqeysta magaalada muqdisho waxa uuna iibiyaa waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan. wiilkan waxa uu sheegay in waxyaabihi ugu yaabka badnaa ay aheyd markii labo gabdhood oo saaxiibo ah ay daawada la isku qurxiyo ...
Cod:Gabar Somaliyeed Oo go,aan ka qaadatay in Nolosha ay lawdaagto dhalin yarada Qurbaha ku nool
September 26, 2014	Comments Off on Cod:Gabar Somaliyeed Oo go,aan ka qaadatay in Nolosha ay lawdaagto dhalin yarada Qurbaha ku nool
Canab xaaji oo kamid ah gabdhaha somaliyeed ee ku nool gudaha magaalada muqdisho ee casimada somaliya oo caawa Ka qeyb qadaneysay barnaamijka todobaadlaha ah ee Koorta caasimada Radio danan, ayaa waxaa ay go,aan ka qadatay in mar dambe qof qurbaha ...
Ku Soo dhawaada:-bar-naamijka Cilmiga iyo Casriga ee Radio danan 19-09-2014
September 19, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:-bar-naamijka Cilmiga iyo Casriga ee Radio danan 19-09-2014
Cilmiga iyo casriga waa bar-naamij todobaadle ah kana baxa war-bahinta danan ee muqdihso habeenka jimcaha sabti ay soo galeyso saacadu marka ay tahay 8:30 habeenimo.
Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka koorta Caasimada ee Radio danan 19-09-2014
September 19, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka koorta Caasimada ee Radio danan 19-09-2014
Bar-naamijka korta caasimada waa bar-naamij todobaadle ah kana baxa warbaahinta danan ee Muqdisho habeenka Jimco sabti ay soo galeyso. caawa ka xiisa badan habeenadi hore ku soo siqa asxaabta bar-naamijka oo dhameystiran.
Ku Soo dhawaada:-bar-naamijka guuxa Wararka ee Radio danan 18-09-2014
September 18, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:-bar-naamijka guuxa Wararka ee Radio danan 18-09-2014
Halkan ka dhageyso bar-naamijka guuxa wararka ee Radio danan.
Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka Caweyska dayaxa ee Radio danan 16-09-2014
September 17, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka Caweyska dayaxa ee Radio danan 16-09-2014
Bar-naamijka Caweyska dayaxa idacada danan Waa bar-naamij habeen Walba ka baxa Warbaahinta. Waxa uuna kamid yahay bar-naamijyada madadaalada ah ee idacaada ay qabato. Qeybta hoose ka dhageyso.
Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka War geysyada ee Radio danan 16-09-2014
September 17, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:-Bar-naamijka War geysyada ee Radio danan 16-09-2014
Bar-naamijka wargeysyada waa bar-naamij todobaadle ah kana baxa warbaahinta danan ee muqdisho, habeenka Talaadada ah arbaco ay soo galeyso. Waxaana lagu soo qaataa wargeys yada caalamka wax yaabaha udu xiisaha badan ee ay ka qoreen dunida.
September 17, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:- Bar-naamijka guuxa Wararka ee Radio danan 16-09-2014
Guuxa wararka waa Bar-naamij Habeen Walba kabaxa Warbaahinta danan ee muqdisho, saacadu marka ay tahay 9:30 habeen.
Ku Soo dhawaada:- Bar-naamijka da,yarta ee Radio danan 16-09-2014
September 16, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:- Bar-naamijka da,yarta ee Radio danan 16-09-2014
Bar-naamijka da,yaerta waa bar-naamij maalinle ah kana baxa warbaahinta danan galab walba, Marka laga reebo galabta Jimcaha ah waxaa uuna soo galaa saacadu marka ay tahay 5:00 galabnimo. Galabta ayaa waxa uu ahaa mid aad uxiisa badan maadaama ay talaado ...